၊မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths – LXXIII | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Business & Economics » ၊မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths – LXXIII
၊မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths – LXXIII
Posted by Kyaemon on Mar 12, 2018 in Business & Economics, Education, Think Different, Think Tank, Travel | 1 comment
Dams Myitsone Nyths Truths
၊အသေးစားရဲ့အားနဲချက်တွေကိုဆောင်းပါး #၁၂နဲ့ # ၇၂မှာဖော်ပြပြီးပါပြီ၊
၊ဒါကြောင့်မို့တရုပ်နဲ့ဥရောပနိုင်ငံတွေကရေနံသုံး ကား တွေကိုကန့်သတ်ပိတ်ပင်လာတယ်၊
၊ပြင်သစ်မြို့တော် ပါရစ်၊အင်္ဂလိပ်မြို့တော်လန်ဒန်၊အမေရိကန်လောစ်အင်ဂျလစ်၊ တို့က
၊မြစ်ဆုံကအပိုအလျံဓာတ်အားကိုဒီလိုမျိုးနေရာမှာသက်သာနှုန်းနဲ့ခြာဂျင်း ၊ စခန်းမှာရောင်းချနိုင်တယ်၊
၊ဘတ်ထရီသုံးလျှပ်စစ်စက်ဘီး ၊electric bikes
၊အိန္ဒိယကတရုပ်နိုင်ငံမှအတုခိုးသင်ယူသင့်တယ်လို့ Bill Gatesကဆို
။အိန္ဒိယနဲ့တရုပ်နိုင်ငံကိုBill Gates ၊ကဆွေးနွေး
၊စီးပွါးရေးပါရဂူ Jim Rogers၊ကိုရုရှားအသံလွှင့်ရုံကမေး
Sanction threats against Russia sent shock waves of panic across the world of investment. There’s still those who still believe in the prospects of the Russian economy, despite the political turmoil. So, what are these prospects? How are sanctions affecting the financial balance of power? And, finally, what does Moscow’s turn to Beijing mean for the future of the global economy? We ask these questions toarenowned investor and businessman – Jim Rogers.
၊စီးပွါးရေးပါရဂူJim Rogers ၊ကိုတရုပ်ပုပ္ဂလိက အသံလွှင့်ရုံကမေး
Legendary investor, Jim Rogers, stops by China’s top financial platform IGUXUAN.com and ‘Talks China’ with popular Financial TV and Program Host ‘TING”
၊တရုပ်နိုင်ငံကစက်ရုပ် Robot၊လော ကကိုလဲတမူထူးခြားသွားအောင်
China Has The Fastest Growing Rise of Artificial Intelligence and Robotics! AI REVOLUTION IN CHINA – YouTube
၊ကမ္ဘာကျော်Google ၊တည်ထောင်သူEric Schmidt ၊နဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်း၊
၊တရုပ်နိုင်ငံကArtificial Intelligence (AI)၊မှာအမေရိကန်ကိုကျော်တက်နိုင်တယ်၊
၊အိန္ဒိယနဲ့တရုပ်နိုင်ငံအကြောင်းEric Schmidt ၊အားမေးမြန်းဆွေးနွေး
၊ အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ချီကာဂို Chicago၊မြို့မှာ တရုပ်ရထား CRRC၊အဖွဲ့ကအမြန်ရထား ၊ဆင်စက်ရုံကြီးလာတည်ထောင်မယ်
Building factory in Chicago: China’s top train maker expands U.S. market
China’s top train maker eyeing growth in the U.S. market. CRRC Sifang America starts construction ofarail car assembly plant in Chicago, Illinois after it wona$1.3 billion contract.
Xinhua visits the construction site in Chicago to find out what the project could bring to the locals.
လောစ်အင်ဂျလစ် Los Angeles၊ကနေလာဗီဂက်စ် Las Vegas၊ပြေးဆွဲမဲ့အမြန်ရထားကိုတရုပ်ကဆောက်ပေးမယ်၊
High-speed rail from Las Angeles to Las Vegas to be built with help from Chinese company – TomoNews
2017 in California HSR: Caltrain Wins Bigly + Las Vegas Bullet Train  Future Transit
၊နိုင်ငံရေးသုတေသီFrancis Fukuyama ၊ကိုတရုပ်နိုင်ငံအကြောင်းမေး
King Long ၊ကားစက်ရုံအကြောင်း
Chinese BYD to bring first zero-emission, pure-electric bus in India
Zhontong Navigator rear engined intercity luxury buses have been caught testing in B
Bangalore. The buses will be …